EChad: Owesifazane waseKamikaze ubulala abantu abayisithupha entshonalanga yezwe - JeuneAfrique.com - Thumela RELAY
Accueil » INQUBOMGOMO EChad: Owesifazane waseKamikaze ubulala abantu abayisithupha entshonalanga yezwe - JeuneAfrique.com
Kushone abantu abayisithupha kulokhu kuhlasela okwenzeka ngobusuku bangoLwesibili kuya kuLwesithathu Agasti 14 ngowesifazane waseKamikaze oxhumene neBoko Haram entshonalanga neChad, kusho isikhulu samasosha aseChadian.
"Cishe ngehora lokuqala ekuseni, kuqhume ibhomu labesifazane elizibulele, nelilungu leBoko Haram, langena egcekeni lenkosi yasesokishini iTatafiromou, lapho lafaka khona icala layo lokubulala abantu base6, kubandakanya nesosha," kusho lesi sikhulu. amabutho amaChadian ngaphansi kokufihlwa.
Lokhu kuqhuma kwamabhomu kwenzeke endaweni yesifunda saseKaïga-Kindjiria, esifundazweni saseLake, lapho iqembu le-jihadist likhule ngokuhlaselwa kusukela ekuqaleni konyaka.
Amabutho amaChadian abhekiswe ngqo
Lokhu kuhlasela kuholele ekutheni kube nokulimala okuningana, ngokusho kwesikhulu samasosha, ongakwazanga ukucacisa isibalo. Umbiko wokuhlaselwa kwawo uqinisekiswe yinhloko ye-NGO yasendaweni, nayo ekhethe ukungagcinwa igama ngezizathu zokuphepha.
Kusukela ngoJuni 2018, isifunda seLake Chad yisigameko sokuhlaselwa okuvuselelwe okuvela kuBoko Haram. Iningi labo ehlose ezikhundleni zamabutho eChadian.
Ekupheleni kukaMashi, Amasosha e-23 Chadian abulewe ekuhlaselweni kwendawo ethuthukile ogwini olusenyakatho-mpumalanga yaleli chibi. Okunye ukuhlaselwa kweBoko Haram ngoJuni 21 nakho kuholele ekufeni kwamasosha amaChadian angama-11 okungenani.
ENiger: Amasosha amane abulawa yisiqhumane endaweni yaseDiffa - JeuneAfrique.com